चीनको बिआरआईलाई काउन्टर दिन एमसीसी आएको हो?
नेपालमा अहिले अमेरिकाले दिने भनिएकाे ५० कराेड अमेरिकी डलर सहयाेग अनुदानकाे विषयलाई लिएर चर्चा चुलिएकाे छ। एमसीसीमार्फत नेपालकाे सडक र उर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्न लागेकाे लगानीलाई लिएर यति बेला बहस केन्द्रित छ। नेपालकाे वैदेशिक सहयाेगकाे इतिहासमा अमेरिकाले दिन लागेकाे अहिलेसम्मकै ठूलाे अनुदानलाई लिएर विकाश प्
कसरी जन्मियो एमसीसी? किन काम गर्दैछ नेपालको ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा ? (भिडियाेसहित)
ओसमा बिन लादेनको सक्रियतामा अल–कायदा नामक आतंकवादी संगठनले अमेरिकाको आर्थिक क्षेत्रको मुटु मानिने ‘ट्वीन्स टावर’ मा सन् २००१ मा हमला गरेपछि विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। यसको बदलास्वरुप अमेरिकाले सन् २०११ मा पाकिस्तानको अबोटाबादमा बिन लादेनलाई मार्न त सफल भयो तर, ‘ट्वीन्स टावर’ हमलापछि
समस्या 'ओली-कार्यशैली' हो- अरूतिर औला ठड्याएर के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला आफ्नो ७३१ दिने ' शासन उत्सव' मनाइरहेका छन्। उनको यो उत्सवसँगै मुलुकमा एउटा नयाँ वहस सुरू भएको छ। बहसले मुलकलाई 'फुटाउ र शासन गर'को ठाडो चिरामा विभाजित गरेको छ। एकातिर ओली क्याम्प छ। ऊ भनिरहेको छ, मुलुक समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राजमार्गमा छ। उनको विपक्षमा
अमेरिकाको समृद्धिमा नेपालको पनि अंश लाग्छ
कसैले मलाई प्रश्न गर्याे, अमेरिकाकाे समृद्धिमा नेपालकाे अंश लाग्छ? म सहजै भन्ने छु, लाग्छ। मैले यसाे भन्नुमा पनि धेरै कारण छन्। सर्वप्रथम त अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। त्यसकारण नेपालले मित्रको हैसियतले सहयोग माग्ने र लिने हक राख्छ। त्योभन्दा अझै महत्वपूर्ण कुर
हामी अलि बढी नै 'रोज रिपब्लिक' पो भयौ कि ?
केही वर्ष भयो, प्रणय दिवशको दिन सामाजिक जञ्जालको भर्चुअल भ्रमण गरेरै बिताउँछु म। समाजशास्त्रको एक विद्यार्थी हुनुको नाता म यस दिनलाई गजबको अवसरका रूपमा लिन्छु। यो दिन सामाजिक सञ्जालमा मानिसले जे जस्ता तस्विर, धारणा, संस्मरण, प्रतिक्रिया राखेका हुन्छन्, ती मेरा लागि गजबका स्रोत सामग्री बन्छन्- विषयवस्तु समीक्षाका लाग
मैले नवराज लम्साललाई सोधेँ- दलितसँग छोरी जाँदा कस्तो लाग्यो?
मैलेँ पढेको पहिलो प्रेम कथा थियो, एन्टोन चेखवको प्रेम कथा। यो कथा वियोगान्त थियो। उसो त हरेक महान प्रेम कथा वियोगान्त नै हुन्छन्। चेखवले कथामा भनेका छन्, प्रेम गर्नेले प्रेमको उच्चतम् बिन्दु के हो भनेर तर्क गर्नुपर्छ या तर्क नै गर्नु हुँदैन। मल
प्रणय दिवस अर्थात 'भ्यालेनटाइन डे' कसरी मनाउने?
गीतको सौखिन भएर नै होला ब्यस्त जीवनमा मेरा लागि गीत संगीत एक मेडिटेसन नै भएको छ। फुर्सत पाउनासाथ गीत सुन्ने, गुन गुनाउने बानीले होला एक्लै बस्दा शून्य लागेर आउँछ। जब एक्लो हुन्छु तब गीत सुन्ने बानी नै बस्यो। मेरो सारा जीवन सबै तिमीलाई
साम्राज्यवाद र इण्डो-प्यासिफिक
साम्राज्यवाद बुझ्न सर्वप्रथम साम्राज्य बुझौं। साम्राज्य भनेको सामान्यतया (निरङ्कुश) सम्राट को महत्वाकांक्षाबाट संचालित शाषन प्रणाली हो। त्यस्तै साम्राज्यवाद भन्नाले शक्ति र प्रभुत्वको विस्तार गर्ने राज्य नीति वा अभ्यास हो। साम्राज्यवाद अहिलेको आधुनिक सभ्य समाजले पचाउने कुरा होइन।
के दृष्टिबिहीनको मुटु हुँदैन?
साङ्ग व्यक्तिका लागि जीवनमा प्रेम जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ हामी दृष्टिबिहीनका लागि पनि। हामीलाई पनि प्रेमी–प्रेमिका बनाउन मन लाग्छ। एकअर्काको हात समाएर सुख–दुःख बाढ्न मन पर्छ। पिढा हुँदा अंगालोमा बाँधिएर रुन मन लाग
सिरियामा अमेरिकाले बच्चा मारेकै हो?
डा. उत्तम गौली
दलित भएकै कारण सुन चोरीको आरोप भोगेकी सपना (भिडियो)
टेम्पो चालिका भन्छिन्– ट्राफिकबाट मिठाे बाेली कहिल्यै सुन्न पाइनँ (भिडियाे)
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः ऋण उठाउन बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको ताकेता
कोरोना भाइरसका कारण कम्पन भएको विश्व अर्थतन्त्र
जापानीहरू नेपालको गाँजा फ्याक्ट्रीमा २० अर्ब लगानी गर्न तयार छन् - विरोध खतिवडा (भिडियो अन्तर्वार्ता)
महरालाई नेकपाले तत्काल पार्टीमा पुनर्स्थापित नगर्ने
माओवादी धम्कीपछि पत्रकारबाट निर्देशक बनेका गाैडेल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममा जम्दैँ (भिडियाेसहित)
हालान्डले ताेडे रोनाल्डो र मेसीकाे कीर्तिमान
भैँसी चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१८-२० करोड कमाएको सुन्छौं, त्यस्तै कमाइ गरोस्ः धुर्मुस-सुन्तली
निमित्तकै भरमा प्रहरीका महत्वपूर्ण मुकाम : राजनीतिको खिचातानीले संगठनमा समस्या
चार हजार वर्षका शिवजी !
पशुपतिनाथको सौन्दर्य : बाँदरबाट जोगियो, मान्छेले चुँडे !
बजारबाट गाउँ फर्केका लक्ष्मण : कृषि फर्मबाटै मासिक २ लाख आम्दानी
‘नक्कली’ उत्पादनको बिगबिगी : बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लेभलिङमा स्थानीय उत्पादन
जसले विभत्स शवसँग १० वर्ष बिताए
श्वासप्रश्वाससम्बन्धी धेरै रोग रोक्न सकिन्छ, कसरी?
डा मनोज यादव
बिएल मिडिया प्रा.लि., नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं, सूचना विभाग दर्ता नं. १३५०, फोनः ०१-४४९६०४० , इमेलः [email protected]